D2M Five-lens camera oblique 3D nidaamka qaabaynta iyo soo saarayaasha | Roobab
D2M waa kamarad saraysa oo waafaqsanaan karayn oo ay samaysay Rainpoo oo ku salaysan jawaab celinta macaamiisha iyo dalabaadka iyo ku salaysan alaabooyinka taxanaha caadiga ah (D2). Ku habboon DJI M300 RTK, waxay gaari kartaa 1:500 (sax ahaan 5cm gudahood) sahanka cadastral la'aanteed GCPs.
Labadan nooc ee kamaradaha oblique waxay sii wadaan faa'iidooyinka miisaanka fudud, cabbirka yar, dhererka foorarka macquulka ah iyo kharashka dayactirka hooseeya ee alaabta caadiga ah. Waxay sidoo kale kor u qaadaan waxtarka soo dejinta xogta iyo la qabsiga xaaladaha cimilada kala duwan. Ma aha oo kaliya ku habboon M210 / M300 taxanaha UAVs, laakiin sidoo kale waxaa lagu qaadi karaa UAV-yada kale ee badan ee rotor / go'an si loo qabto shaqooyin badan. (D2M kaliya waxay quseysaa UAV-yada rotor-ka badan).
QTY ee muraayadda 5pcs
Pixels wax ku ool ah 24.3MP (hal lens)/120MP (guud ahaan)
Dhererka Focal 25mm (Vertical)/35mm (Oblique)
Cabbirka dareemayaasha APS-C,23.5*15.6mm
Dhexdhexaadinta Soo-gaadhista ≥0.8s
Habka soo-gaadhista kamarada Soo-gaadhista Isochronic/Isometric
Xagasha muraayada 45 darajo
Bixinta Korontada SkyPort awood isku dhafan
Xawaaraha soo dejinta xogta ≥300M/s
Heerkulka shaqada -10°C~+50°C